ကော်ဖီအနံ့လေး အရမ်းမွှေးတာပဲနော် ဒီတခေါက် ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာကိုဆုံးအောင်ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး ဘယ်သူ့စီးပွားရေး ကို ထိခိုက်လိုချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ရေးသားခြင်းမဟုတ်ပါတယ် ကော်ဖီမစ် COFFEE MIX အကြောင်းပါ ဗျ။ကျွန်တော် ဟာ လက်ရှိ THAI ခေါ် ယိုဒယားပေါ့ […]
မျက်နှာနဲ့ လက်ချောင်း ခြေ ချောင်း အသားရေလေးတွေ စိုပြေနေ စေဖို့သဘာဝ နည်းလမ်း….
By Uptodate MMPosted on June 24, 2019
အရေပြားဆိုတာ ကျွန်မတို့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အဓိကအင်္ဂါရပ်တစ်ခဖြစ်ပါတယ်။ အသားအရေကျန်းမာရေးကလည်း သိပ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ ဓါတုပ္စစည်းတွေမကြာခဏ ထိတွေ့လို့ အသားအရေတွေက တဖြည်းဖြည်း ညှစ်နွမ်းလာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သဘာဝနည်းလမ်းနဲ့ ကုသနည်းတွေလည်း ထပ်မံပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မျက်နှာအသားအရေသာမက လက်ချောင်းခြေချောင်းလေးတွေက အသားအရေလည်း လှပနေဖို့လိုပါတယ်။ နေလောင်ထားလို့ […]
ဆီးချိုသွေးချိုဝေဒနာရှင်များအမြစ်ပြတ်ပျောက်ကင်းလိုပါကအင်မတန်လွယ်ကူစွာပျောက်ကင်းသောနည်းကို ညွှန်ပြပေးပါမည် ဆားနှစ်ပိသာကိုရေပူရေအေးမှာစပ်ပြီးထည့်ပါပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းကိုယ်လုံရေမှာမြုတ်ရပါမည်မိနစ်နှစ်ဆယ်ကြာစိမ်ရပါမည် စိမ်နေစဉ်အသက်အောင့်ပြီးဝမ်းဗိုက်ကိုနောက်သို့ချပ်ထားပါမျက်ဝန်းကိုမှိတ်လျက်စိတ်ကိုမျက်ဝန်းမှာစူးစိုက်ပါရေသည်မပူလွန်းမအေးလွန်းဖြစ်ပါစေ မစိမ်မီဆားလက်တဆုတ်ကိုရေစိုယုံစွတ်ပြီးတကိုယ်လုံးကိုအနှံ့ပွတ်လိမ်းရပါမည်နှစ်ပတ်သို့မဟုတ်တလအတွင်းရောဂါအနည်းအများပေါ်မူတည်ပြီလုံဝပျောက်ကင်းပါမည် ပျောက်ကင်းပြီးနောက်မှာလည်းရေပူရေအေးစပ်ပြီးအငန်ဓါတ်ရှိရုံသာဆားကိုခပ်ထားသောရေကို ချိုးရပါမည်ပျောက်ပြီးနောက်တပတ်တခါဆားနှစ်ပိသာနှင့်စိမ်ရပါမည် ဆားရေစိမ်သောအခါရှောင်ရန်ဆောင်ရန်အချက်များရှိပါသည်ထိုသတိပေးချက်များကိုအထူးလိုက်နာရန်လိုအပ်ပါသည် စိမ်သောအခါညနေစောင်းအချိန်ခြောက်နာရီ လောက်မှာစိမ်ပါကပိုသင့်မြတ်ပါသည် ဆောင်ရန် ဆားရေမစိမ်မီဆားပွတ်ပါရန် စိမ်နေစဉ်အတွင်းညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်းအသက်အောင့်ကာဝမ်းကိုချပ်ထားပါအသက်ရှူလိုကရှူနိုင်ပါသည်ပြီးလျှင်ပြန်အောင့်ထားပေးပါ မျက်ဝန်းကိုမှိတ်ပြီးစိတ်ကိုထိုမျက်ဝန်းမှာစူးစိုက်ပါ ရောဂါသက်သာပျောက်ကင်းပါသော်လည်းဆားရေကိုသာချိုးပြီးဆားပွတ်လိမ်းခြင်းကိုနေ့စဉ်ပြုပါ ရှောင်ရန် ဆားစိမ်ပြီးလေတိုက်သောနေရာတွင်လည်းကောင်း ပန်ကာ အဲယားကွန်းခန်းတွင်လည်းကောင်း ကးမှန်ဖွင့်မောင်းခြင်းကိုလည်ကောင်းဆိုင်ကယ်စီးအပြင်ထွက်ခြင်းကိုလည်းကောင်းမပြုလုပ်မိစေရန်အထူးသတိပြုရပါမည် […]
By Uptodate MMPosted on June 2, 2019
ဆန်ဆေးရည်တွေ မသွန်ပစ်နဲ.နော် ဒီလိုဝက်ခြံ ၊ တင်းတိပ် ၊ မှဲ့ခြောက် နှင့် အရေးအကြောင်းများကို ပျောက်အောင်လုပ်လို့ရတယ် ထမင်းချက်ဖို့ ဆန်ဆေးတဲ့အခါ သွန်ပစ်လေ့ရှိတဲ့ ဆန်ဆေးရည်မှာ မျက်နှာကို ကောင်းမွန်စေတဲ့ အာနိသင်များစွာ ပါရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆန်ဆေးရည်ရဲ့ […]
ဆီးချိုကို အမြစ်ပြတ်ပျောက်ကင်းစေတဲ့ ဆီးဖြူသီး (၁၀)လုံးနှင့်် ငါးရံ့ (၁၀)ကျပ်သား ” ဆီးချို​ရောဂါ​ဝေဒနာ အမြစ်​ပြတ်​သက်​သာ​ပျောက်​ကင်း​​စေတဲ့နည်း ​တစ်​ပတ်​( ၁)ကြိမ်​ (၃)ကြိမ်​စားပြီးပါက ဆီးချို​ရောဂါ အ​ခြေ​နေကို ပြန်​လည်​စမ်းသပ်​ရန်​ (၆)လခွဲ စွဲစားပါက အမြစ်​ပြတ်​​ပျောက်​ကင်း​ကြောင်း ဖတ်​ရှုရသဖြင့်​ […]
အသားရောင်းသူ တစ်ဦးမှ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုဝန်ခံ ထားတာလေးပါ… အသားရောင်းသူ တစ်ဦးမှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ၀န်ခံပြောဆိုထားတာလေးပါ။ ဒီပုံမှာတွေ့ရတာကတော့ ၀က်သားထဲမှာ ကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းလေးပါ။ သူ အသားရောင်းခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၃၀ ရှိပါပြီတဲ့… အသားထဲမှာ ဒီလို ကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းတွေ့ပေါင်းလဲ […]
ကင်ဆာကြောင့်မသေနိုင်ကြတော့ပါဘူး ဒေါက်တာ HEAYTHY LIFE က ပြောတယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာ သေချာဂရုစိုက်ပေးနိုင်ရင် ဘယ်သူမှ ကင်ဆာကြောင့်သေစရာမလိုတော့ပါဘူးတဲ့ ပထမအဆင့်က သကြားလုံးဝ မစားပါနဲ့ ရှောင်ပါ အဲဒါကင်ဆာဆဲလ်က အလိုလိုသေသွားပါလိမ့်မယ် ဒုတိယအဆင့်က အစာမစားခင်မှာ သံပုရာတစ်လုံးကို ရေနွေးနဲ့ […]
By Uptodate MMPosted on May 31, 2019
အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတာကြောင့် ပြန်နွှေးမစားသင့်တဲ့ အစားအစာ ( ၇ ) မျိုး ကျွန်တော်တို့မှာ စားကြွင်းစားကျန်များကျန်ရှိလျှင် အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့အကြိုက်ဆုံးအစားအစာဆိုရင် ၂ကြိမ်၃ကြိမ်နွေးပြီး ပြန်စားတတ်ကြပါတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ တစ်ချို့ အစားအသောက်များဟာ ပြန်နွေးပြီးနောက် စားဖို့ဘေးကင်းသော်လည်း တစ်ခြားအစာများဟာ ဘေးမကင်းဘဲ […]
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် လိပ်ခေါင်းသွေးပါ မီးကွင်းရှာအလုပ်ကများရသည်ကြား လိပ်ခေါင်းကြောင့် ဦးမိုး အတော်စိတ်ညစ်နေပုံရ၏။ မကြည်မလင်နှင့် လိပ်ခေါင်းသွေးပါသည်မို့ ပုဆိုးပင် သွေးကွက် ထင်နေလေသည်။ အမှတ်မထင် ကျေးဇူးရှင် တိုင်းရင်းသမားတော်ကြီးဦးကြွယ် ပေးသောဆေးနည်းကြောင့် သွေးကျလိပ်ခေါင်း (၇)ရက်ဖြင့် လိပ်ခေါင်ပြန်ဝင်အပြီးပြတ်၍ ယနေ့တိုင်သွေးကျခြင်း၊ […]
သင်ယူလိုက်တဲ့ သင့်ချစ်သူ မိန်းကလေး သင်နဲ့ မယူခင် အပျိုစစ်ခဲ့ မစစ်ခဲ့ သိချင်ပါသလား !!! အမေး – ကျမတို့ လင်မယားနှစ်ယောက်မှာ ပြဿနာတစ်ခု တက်နေပါတယ်ရှင့်။ ကျမက အခုအသက်၂၃ နှစ်ရှိပါပြီရှင့်။ ကျမတို့ မိန်းကလေး […]